သမ္မတကြီးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အား အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သမ္မတကြီးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အား အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာ
သမ္မတကြီးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အား အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာ
Posted by koyin sithu on Jun 10, 2012 in Copy/Paste, Facebook, Myanma News, News | 50 comments
http://www.facebook.com/ElevenMediaGroup မှ ကူးယူဖော်ပြပေးသည်။
ကျောက်ဖြူမှာ ရောက်နေတဲ့ ကိုနိဂိမိ ၇၇နှင့် ကိုသန်းထွတ်ဦး အခြားရွာသူားတို့ ရေ… ရေသောက်ရေ သေချာကြည့်သောက်တော့
ဘင်ဂါလီတွေ ရေတွေကို အဆိပ်လိုက်ခေတ်ဖို့ အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းတွေ ကြံနေကြပြီ။
ကျောက်ဖြူခရိုင် ရမ်းမြို့ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်တွင် ယနေ့ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခန့်က အများပြည်သူ သောက်သုံးနေသော (ဘန်းတောင်) ရေကန်ကို ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီး နှစ်ဦးလာရောက်ပြီး လူအများသေစေနိုင်သည့် အက်ဆစ်များကို ရေကန်ထဲသို့ ပစ်ချရန် ပြုလုပ်နေစဉ် လုံခြုံရေးများက အလျှင်အမြန် ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
By : Eleven Media Group
သမ္မတကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
မိဘပြည်သူများ သိရှိပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ (၂၈)ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်နီမော် ဖြစ်စစဉ်ကို အခြေခံပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအခြေအနေဟာ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အပါအဝင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ သတိပြုပြီး ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းစောင်ရွက်ကြရမယ့် အနေအထား ရောက်ရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အိုခေ Let’s start the show (ဘိုလို ရေးတာမှားရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျို့ )
ဒါ ပစ်မိန့် ဘဲ ။
သမ္မတကြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ
မြန်မာ့တပ်မတော် အမြန်ဆုံးအောင်ပွဲဆင်ပါစေ ။
ရခိုင်လူမျိုးအားလုံး ဘေးကင်းရန်ရှင်းပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
ကိုမောင်ပေ ပို့သသော မေတ္တာ ၊ ရွာသူရွာသားတွေ ပို့သသော မေတ္တာတရား တို့ကြောင့် ရခိုင်လူမျိုးအပါ အ၀င် မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံး ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ရန်မှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ….
ငါလိုးစစ်တပ် လီးစစ်တပ် ငါလိုးမသားသမ္မတ လီးသမ္မတ မအေလိုးတွေ ဘုန်းကြီးတွ ကျောင်းသားတွေ အေးအေးဆေးဆေးမေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်တာကျတော့ လူအုပ်ထဲကိုပစ်တယ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲစခန်းရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတာကျတော့ လူကိုတည့်တည့်ပစ်တယ် ။မအေလိုးကုလားကိုကျတော့ မင်းမအေလိုးတဲ့ကောင်မလို့ တည့်တည့်မပစ်တာလား။ ငါလိုးမသားတွေ လီးဘဲ။ ဖတ်တဲ့သူကိုတော့ တောင်းပန်ပါရဲ့ဗျာ ။ ကျွန်တော်မရိုင်းတတ်ပါဘူး ဘယ်တုန်းကမှလဲ မဆဲဘူးပါဘူး ဒီနွားတွေလုပ်နေပုံကို အသဲနာလွန်းလို့ပါဗျာ။ ကျွန်တော် ဗမာစစ်စစ်ပါ ။ ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားရခိုင်တွေအတွက်စိတ်နာလွန်းလို့ပါ စိတ်မချမ်းသာလွန်းလို့ပါ။
စစ်တပ်ဆိုတာ အမိန့်နာခံရသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားပေးပြီး ကိုယ်ပစ်ချင်တိုင်းပစ်လို့မရပါဘူး။
ဆက်ရေးအုန်းမယ်ဗျာ တော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်လွန်းလို့ပါ။။ ဟိုရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဆိုတဲ့ နွားတွေရောဒီအချိန်ကျတော့ ဘယ်နားသွားပြီးမြက်စားနေလဲ။ ဘယ်မှာသွားသေနေလဲ ။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကျတော့ လက်နက်ကိုင် ပြီး ကိုက်ချင်ကြတယ် ။ အခု ဟာက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အထိနာနေတာလေ ။ အဲဒါတောင် အဲဒီ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဆိုတဲ့ ကောင်တွေက လက်ထဲမှာသေနပ်ကိုင်ပြီးဘာလုပ်နေတာလဲ ။စစ်တပ်ကမချရင်တောင် မင်းတို့ကချရမှာ မင်းတို့က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်စားပြုတာဆို ။ ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးဆို။ အခုကျတော့ ဘယ်မှာသွားပြီး ဖင်ခံနေလဲ ငါလိုးမသားတွေရဲ့။ဟိုမှာကုလားကမင်းတို့ဖင်ကိုတက်ချဖို့လုပ်နေပြီ မင်းတို့က ခုထိငြိမ်ချက်သားကောင်းတုန်း။ခုချိန်မင်းတို့တက်တိုက်လို့ ဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဘူးဟနွားတွေရ။ တိုက်စမ်းပါ။ အသေသတ်ပြစ်ကျစမ်းပါအဲဘင်္ဂလီကုလားတွေကို။ မင်းတို့ပထွေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းတို့ အမေတွေ နှမတွေ အစော်ကားခံနေရတာ မင်းတို့ ညီအကိုတွေ အသတ်ခံနေရတာ မင်းတို့က ဒီအတိုင်းကြည့်နေတော့မှာလား ဒါမင်းတို့အလုပ်မဟုတ်လို့လားနွားတွေရ။တောက် စိတ်ရှိသလောက်ဆဲရရင်တော့ လွန်တော့မယ်ထင်တယ်။
ကိုရင်နောင်နောင်ရေ.. ဒေါသမကြီးနဲ့လေဗျာ… သူတို့လည်း အမိန့်နဲ့
အခြား လူကြီးသူမ၊ ရဟန်းတော်တွေ ဖတ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်က သတင်းဖော်ပြပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒသက်သက်ရယ်ပါ။
ကိုရင်စည်သူရေ ကျွန်တော်လဲ မဆဲချင်ပါဘူးဗျာ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့လဲ ကျွန်တော် ကွန်မန့်မရေးတတ်ပါဘူး ဆဲတယ်ဆိုတာလဲ ကျွန်တော့်ဝါသနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ကို ဒေသထွက်လွန်းလို့ပါ ။ မဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျတော့ သတ္တိတော်တော်ကောင်းကျလွန်းလို့ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘာပြောပြောဗျာ ဦးသန်းရွှေကြီးကိုတောင် သတိရမိတယ် ။ သူသာရှိရင် ဒီလိုဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာလို့တောင်တွေးမိတယ်။ တကယ်ပါဗျာကုလားလူပါးဝတာကို မခံနိူင်လွန်းလို့ပါ။ကိုယ့်လူမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူး ။ နိူင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကတောင် ဒီကောင်တွေက ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောနေကြတာတောင် ဘာကိုချင့်ချိန်နေလဲမသိပါဘူး။ ရခိုင်တွေရှိလို့သာမဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကုလားပြည်ဖြစ်သွားနိူင်တယ်ဗျ အဲဒါကိုမခံနိူင်လွန်းလို့ဆဲမိတာပါ ။ ကျွန်တော်တောင်းပန်ထားပါတယ်ဗျာနော်
ကိုရင်နောင်နောင် ပညာရှိအမျက် အပြင်သို့မထွက်ရတဲ့။ အကြီးအကဲပိုင်းမှာလည်း
ကျနော်တို့ထက် အများကြီး မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ။ အချိန်တစ်ခုကို
စောင့်ပြီး ဘင်ဂါလီကုလားစုတ်တွေကို အမြန်ဆုံး အမိမြေက နှင်ထုတ်မယ်လို့
ထင်ပါတယ်။ စစ်တပ်ကို ၀ကွက်အပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ စစ်တပ်ဆိုတာ
ပရိတ်ရွတ်ပြီး ထိန်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။။။ သိတယ်ဟုတ်…
ဒါကြောင့်… ဒါကြောင့် အားလုံးသော ရွာသူားအပေါင်းတို့ ကျွန်တော်
((((ကုလားအလောင်းတွေ့လျှင် ဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့.. အင်တာနက်မတင်ပါနဲ့.. ရေငုံပြီးနှုတ်ပိတ်နေပါ.. ရဲနဲ့တပ်က ပက်ပက်စက်စက်တွယ်ပြီဆိုရင်လည်း .. ဘယ်သူမှ မဖွပါနဲ့.. မိုးပေါ်ထောင်ဖောက်သည်ဟုသာ ပြောကြပါ..))))
ပြည်သူ့ တပ်မတော် သားဆိုတာ မှန်ကန်ရင် ပြည်သူကို ရဲရဲ ၀ံဝံ ကာကွယ် ပြလိုက်စမ်းပါ ။လုပ်ခွင့်လဲပေးနေပြီဘဲ။တိုင်းပြည် နဲ့ ပြည်သူလောက် ဘယ်သူမှ အရေးမကြီးဘူး။ဖတ်ဘူးတာလေးတခုရှိတယ်
ထိုင်းစစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာဆို ထိုင်းမြေကို ခြေထောက်နဲ့တောင် အနင်းမခံဘူး…..***(အဲဒီအချိန်က ပြည်ပနိုင်ငံအချို့က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ် ဘာညာစွပ်စွဲတော့…ထိုင်းရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက စွပ်စွဲတဲ့နိုင်ငံက ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံမလား…လက်ခံမယ်ဆိုရင် ကျနော်ကိုယ်တိုင် သင်္ဘောနဲ့တင်လာပြီး လာပို့ပေးလိုက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တာ…အကုန်အသံပိတ်သွားပါတယ်…
စောဒီး မောင်စည်ရေ – မှတ်ချက်မှာ သတင်းတွေ ထပ်ပြီး တင်မိလို့။ ဒါကို မမြင်လိုက်ဘူး။
No worry! ပါ အရီးလတ်… စည်းကမ်းအတိုင်းပဲသွားပါ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် ပို့စ်ခေါင်းစဉ်က ဘာလို့ ဂေဇက်စာမျက်နှာမှာ
ခေါင်းစဉ်မပေါ်တာလဲခင်ည… :? :?
ဘယ်စည်းကမ်းပိုင်းနဲ့ ငြိနေလို့ ဘာလုပ်ထားလဲ သိချင်ပါတယ်…
အရီး က မင်းတင်ပြီးသား ကို တစ်ခြားမှာ ထပ်တင်မိနေလို့ စောဒီး တာပါ။
ဒီရက် တော့ သတင်းတွေ၊မှတ်ချက်တွေ အထပ်ထပ် နဲ့ သူဂျီး မှာ မွဲဆေး ရနေပြီ။
ဒါလဲ တိုင်းပြည် ကို လှူ နေတယ် လို့ မှတ်ပါ သူကြီးရယ်။
ကျွန်မ ကတော့ ပွိုင့်တွေအားလုံး သူကြီး ကို ပြန်လှူပါတယ်။ ;-)
ကျွန်မ လဲ ဘယ်တော့ အလုပ်ကနေ warning လာမယ်မသိ။
ဟုတ်တယ်ဗျ. မပေါ်လို့ ကျနော်လဲ အံ့သြနေတာပါဗျ။ကိုနီဂိမိက ကျောက်ဖြူမှာပါ။
ဖက်အတွက်လဲ စိုးရိမ်စရာပါ။အခြေအနေကို တည်ငြိမ်အောင်အမြန်ဆုံထိန်းသိမ်းနိုင်
ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
သတင်းမပြည့်စုံပါဘူးကွာ သေချာရောကြည့်ရဲ့လါး စာဖတ်ပြီး လက်မထောင်ပြ ဖင်ကုပ်သွားတာ။
ဘယ်နေရာမဆို အဖျက် အမှောင့်က ရှိပြီးသား
ကိုနောင်နောင်ပြောတာလေး က အားရစရာ
အပေါ်က ကွန်မန့်က နားခါးစရာ
နားလည်လွဲနေသူများ … ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ရေးနေသူများ သို့သိစေရန် ရှင်းလင်းခြင်း …
သမ္မတကြီးထုတ်ပြန်တဲ့ ပုဒ်မ ၄၁၃ အပိုဒ်(က) ကိုနားလည်ရန်အတွက် ပုဒ်မ ၄၁၂ ကို ပထမဦးစွာ သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ပုဒ်မ ၄၁၂ (က)ဟာ ပြည်သူအိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို အန္တရာယ် ရှိသည် နှင့် သမ္မတဟာ
အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ နှင့် ညှိနှိူင်းပြီး ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်တဲ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ကာ အရေးပေါ် အခြေအနေကို ကြေငြာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အပိုဒ် (ခ) ကတော့ သမ္မတဟာ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ ညှိုနိုင်းရာမှာ အဖွဲ့ဝင်တွေစုံလင်စွာတတ်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ကာချူပ် ၊ ဒု-ကာချုပ် ၊ ကာကွယ်ရေးဌာန ဝန်ကြီး နှင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး တို့ ညှိနှိူင်းပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေကို အချိန်မှီ ထုတ်ပြန်ကြေငြာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ သို့ အမြန်ဆုံးတင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ပုဒ်မ ၄၁၃ အပိုဒ်(က) ကတော့ ပုဒ်မ ၄၁၂ အရ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာတဲ့ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ်ပါတယ် ။ ကဲ ကြည့်ကြရအောင် ။
ပုဒ်မ ၄၁၃ (က) ။ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာချက် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နယ်မြေ ဒေသအတွင်း
မူလအခြေအနေသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိစေခြင်းငှာ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဝင်များ ၊ နယ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အဖွဲ့ဝင်
များ ကတည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့် အညီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှူရှိစေရန်
တပ်မတော်၏ အကုအညီကို ရယူဆောင်ရွက်နိုင်သည် ။
ဆိုလိုတာကတော့ စစ်တပ်က နယ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ ဒေသအာဏာပိုင်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အဝဝကို ဝင်ရောက် ကူညီရမယ် ။ အကယ်၍ ထိုသူများကို နှောင့်ယှက်သူများ အား စစ်တပ်မှ စစ်တပ် အလုပ် လုပ်ပြရပါလိမ့်မယ် ။
ဒါကြောင့်လည်း အခုချိန်မှာ ဒေသအာဏာပိုင်တွေ ပြည်သူ့ရဲတွေနောက်မှာ တပ်မတော်က ဝင်ရောက်အားဖြည့်ကူညီနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာလည်း ပါဝင် ကူညီပြီး fatigue လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ် ။
တကယ်လို့သာ ဒီထက်ဆိုးဝါးလာပါက ပုဒ်မ ၄၁၃ အပိုဒ်( ခ) က တော့ တော်တော် ပြင်းထန်ပါတယ် ။
ပုဒ်မ (ခ) မှာတော့ သမ္မတရဲ့ အမိန့်နဲ့ အဆိုပါနယ်မြေကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေသတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဲလိုဆိုရင် သမ္မတရဲ့ အမိန့်နဲ့ အဆိုပါနယ်မြေ ရဲ့ တာဝန်ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို ဦးစီးဆောင်ရွက်ရပါ့မယ် ။ကာချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင် မလုပ်လျှင်လည်း အခြား စစ်ဘက် အဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦးဦးကို ထပ်ဆင့် လွဲအပ်နိုင်ပါတယ် ။
ဟာ…ဒါဆို စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာလား …ဆိုကြမယ်။ အဲလိုဆိုရင် မှားပါလိမ့်မယ် ။ ပုဒ်မ (ခ) အရ စစ်
တပ်ဟာ အဆိုပါနယ်မြေကို နယ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ မနိုင်တော့လို့ စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကို သမ္မတ
ရဲ့ အမိန့်နဲ့သာ ဆောင်ရွက်ရတာပါ ။ အဲလို အုပ်ချုပ်ခဲ့တာကို တိကျသေချာနိုင်ဖို့ နောက်ထပ် ပုဒ်မ ၄၁၄ အပိုဒ် (က) ကို ဆက်ကြည့်ရအောင် ။
ပုဒ်မ ၄၁၄ မှာတော့ သမ္မတဟာ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည့်တဲ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေကြေငြာတဲ့အခါမှာ –
အပိုဒ် (က) – အမိန့်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ အကျိုးသက်ရောက်သည့်နယ်မြေ ဒေသနှင့် အချိန်ကာလတို့ကို သတ်မှတ်ဖော်ပြရမည် ။
ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ နံပါတ် (၄) မှာ ဤအမိန့်သည် ယနေ့မှစ၍ နောက်ထပ် အမိန့်တစုံတရာထုတ်ပြန်မှူ မရှိမခြင်း အတည်ဖြစ်သည် လို့ပါရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အခုဆိုရင် ရခိုင်ဒေသကို ပုဒ်မ ၄၁၃ ပုဒ်မ (က) အရ တပ်မတော်မှ ဝင်ရောက်ကူညီနေတဲ့ အဆင့်သာဖြစ်ပါတယ် ။
ပုဒ်မ (က) အရ အုပ်ချုပ်ခြင်းမှ မနိုင်တော့မှသာလျှင် ပုဒ်မ (ခ) အရ ပြည်သူများ
ပြောဆိုနေတဲ့ စစ်တပ်က ကုလားများကို စစ်ပွဲအသွင် တိုက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား ။
Face Book မှ ရပါသည်။
လက်ရှိအချိန်၊ မြန်မာ့စံတော်ချိန် ၂း၃၀ခန့်တွင် စစ်တွေမြို့နယ်တွင် မွတ်ဆလင်အများဆုံးနေထိုင်သော နာဇီရွာအား ရခိုင်လူမျိုးတွေက မီးရှို့လိုက်သည်။ ၂၀၁၂ ဇွန်လ ၁၀ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစ၍ စစ်တွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်များနေထိုင်သော မီးဇံရွာ၊ မြို့သူကြီးရွာ၊ ပလုတ်တောင်ရွာ၊ ကျောင်းတတ်လမ်းရပ်ကွက် ဈေးဟောင်းမော်လိပ်ရွာ၊ အနောက်စံပြ၊ ဘု…မေအုပ်စု လက်သမားရွာ၊ ဘုမေ ဝါယာလစ်ရွာ၊ စသည့်ရွာများရှိ ဗလီကျောင်းများနှင့် လူနေအိမ်ခြေများ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ပျက်စီခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဗပြတိုက်အနီးရှိ ဗလီကျောင်းနှင့် မွတ်ဆလင်ရွာကိုလည်း၊ မီးရှို့ပျက်စီးခဲ့သည်။ လူသေအလောင်း ၅၀ ကျော် မွတ်ဆလင်လက်ထဲရှိပြီး၊ ကျန်အလောင်းများကို လုံထိန်းရဲများကကားဖြင့်သယ်ဆောင်သွားပြီး အလောင်းဖျောက်လိုက်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။ ရခိုင်မောခ်များက မီးရှို့နေစဉ် လုံထိန်းရဲများက ရှေ့ဘက်မှ နေ၍ မွတ်ဆလင်များအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန် လမ်းပေါ်သို့ထွက်လာပါက သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်လိုက်သည်။
အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ မွတ်ဆလင်ပိုင်ဈေးဆိုင်တွေ ဖောက်ပြီး၊ ပစ္စည်းတွေကို ရခိုင်မောခ်များက သယ်ဆောင်သွားသည်။…။ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာထားပေမဲ့ မွတ်ဆလင်များအိမ်တွင်ပုန်းအောင်ပြီး ရခိုင်မောခ်များလွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလားနေသည်။…
သတင်ရပါက ဆက်လက်ပို့သွားပါမည်။ News updated!!
mg shan says:
wishing u bleeding to death right now, very clearly for ur comments at Myanmar n English , i know u r not alone, n we(Myanmar) knew what ur fucking idea, actually, can u really understand English? ‘Fuck U’ , can u tell me what that mean, thank.
hey blood tears kalar,
If you have any picture of Rakhine people or Myanmar Troop shooting your kalar, you are welcome to share. As usual, you wicket kalars are making up the story. Look at the pictures clearly and people can tell whether the men near the fire are your kalars or Rakhine? Make sure you do not bring the bullshit/make up pictures of dead kalars from somewhere else.
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်နှံ့ပုံကို လေ့လာခဲ့ရာ အေဒီ ၈-ရာစုနှင့် ၁၆-ရာစုအတွင်း ပါရှန်းနှင့် အာရဗ်သင်္ဘောများ ရေကြောင်းသွားလာခြင်းသည် အရှေ့ဖျားပင်လယ်များတွင် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ၎င်းပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းများသို့လည်း ပါရှန်နှင့် အာရဗ်ကုန်သည်တို့ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၁၆၆၀ တွင် အိန္ဒိယပြည်၌ ရှာဂျဟန်ဘုရင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ သားတော် ရှာရှုဂျာသည် နောင်ထောင် ကြရန်အဇစ်နှင့် နန…်းလုခဲ့ရာ အရေးနိမ့်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် စန္ဒသုဓမ္မမင်း (၁၆၅၂-၁၆၈၄)ထံ အကူအညီတောင်း ခိုဝင်လာခဲ့သည်။ စန္ဒသုဓမ္မမင်းအား ကတိမတည်ဟုဆိုရာ ရှာရှုဂျာက ပုန်ကန်ခဲ့ရာ ရှာရှုရျာကျဆုံးခဲ့ပြီး သူ၏ အခြွေအရံများ ကမန်(လေးသည်တော်)တို့အား ရခိုင် ဘုရင်၏ ကိုယ်ရံတော် တပ်ဖွဲ့ ခန့်ထားခဲ့သည်။
Why is5% of Rakhines overcoming 95 % of Rohingya Muslims in Maung Daw?
The main reason for this is that there are more than 95 % of Rakhines in the Police Force of Arakan.And these Rakhine polices are with guns but Rohingya are gunless.That’s the reason5% of Rakhines is overcoming 95 % of Rohingya in Maung Daw.
ဘက်လိုက်မြန်မာမီဒီယာများတွင် မဖော်ပြသော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပျက်ဆီးသေဆုံးမှုများစာရင်းအကျဉ်းချုပ်
ညနေ(၄း၀၀)။ ။ အဝေးပြေးဂိတ်တွင် ရခိုင်များကရိုက်သတ်။
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် မွတ်စလင် ကျား ၁ ဦး
အသက်၄၅ နှစ်အရွယ် မွတ်စလင် မ ၁ ဦး
ည (၁၀နာရီ)။ ။စစ်တွေလေဆိပ် ဗလီကို မီးရှိုး…ဖျက်ဆီး
တောင်ကုတ်နှင့် ရမ်းဗြဲမှရခိုင်လူမျိုးနှစ်ထောင်ကျော် မောင်းတောသို့ ထွက်ခွာ
ထို့နောက် လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် မောင်းတောသို့ လှေ ၃ စီးဖြင့် ထွက်ခွာရာ အစိုးရရေတပ်က တစ်စီးကို ဖမ်းမိ။ ယင်းသတင်းကို ပြင်ပတွင် ပျံ့နှံ့နေသည်မှာ အလ်ကိုင်ဒါ နှင့် ဘင်္ဂါလီ များလက်နက်အပြည့် အစုံဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ချက်ဆီးလုယက်သတ်ဖြတ်ရန်လာရောက်စဉ် အစိုးရ ရေတပ်မှ တစ်စီးအား ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့။ နှစ်စီးလွတ်မြောက်ဟု သတင်းမှန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဖေါ်ပြ။
ည (၁၁နာရီ) ။ ။ စစ်တွေရှိ ဘုမေ၊ ၀ါယာလက်ရွာ၊ ဟဇ်မာရွာရှိ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်များကို ရွေးပြီး လုံထိန်းက သေနတ်ဖြင့်ပစ်၊ ၄ဦးသေ၊ ၉ဦး အခြေအနေစိုးရိမ်ရ။
ညပိုင်း။ ။စစ်တွေရှိ နာဇီရွာမှ မွတ်စလင် ၈ ဦးအိမ်သို့ ပြန်စဉ်ရွာသို့ မရောက်မှီလမ်းတွင် ရခိုင်မှ လက်နက်များနှင့် ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြရာ ၇ ဦးသေဆုံး၊ ၁ ဦးသာဒဏ်ရာဖြင့် ရွာသို့ ပြန်လည်ရောက် ရှိခဲ့။ ၇ ဦးရဲ့ အလောင်းပြန်မရ။
နံနက် ၁ နာရီ ။ ။ ၀ါယာလက်ရွာတွင် လက်နက်ကိုင်ရဲများမှ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်များကို သေနတ် ဖြင့် ပစ်ခဲ့ရာ နူးရ်ဂျန် ၁၈ နှစ် (ဘ) ဦးအဗူဟာရှင်မ် နှင့် ဟာရွန်ရာရှီးဒ် ၁၈ နှစ် (ဘ) ဦးကာမင်း ဆိုသည့်လူငယ် နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ အလောင်းပြန်ရသော်လည်း မြေမချနိ်ုင်သေးပါ။
နံနက် ၉နာရီ။ ။မွတ်စလင်ရွာဖြစ်သည့် ပိုက်ဆိပ်ရွာနှင့်ဗလီကို ရခိုင်များက စတင်မီးရှို့ဖျက် ဆီးခဲ့။ မွတ်စလင်ရွာဖြစ်သည့် ဒူအာမရောင်ရွာကို ရခိုင်များက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက မွတ်စလင်များကို ပစ်ခတ်ရာ ၅ ဦးအခြေအနေ စိုးရိမ်ရ။
နေ့လည် ၁၂နာရီ။ ။မွတ်စလင်များဖြစ်သည့် မော်ဂိတ်ရွာ၊ မော်ဂိတ်ဈေးဟောင်းနှင့် ဘူမေရွာများကို ရခိုင်များမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး ပစ္စည်းများလုယက်ဖျက်ဆီး။
နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ။ ။ရမ်းဗြဲရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှစ်လုံးကို အကြမ်းဖက်များက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့။
နေ့လည် ၃ နာရီ။ ။၀ါယာလက်ရွာမှ ခင်မောင်ချို ၃၂ နှစ် (ဘ)
ဦးအလီမြားမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးပြီး အလောင်းပြန်မရ။ ယင်းရွာတွင် ယခုအခါ လူတစ်ဦးမျှ မရှိတော့ဘဲ ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရ။
ညနေ ၄ နာရီ။ ။ဖျက်ဆီးခံရသော မော်လိတ်ဈေးဟောင်းမှ လက်ကျန်မွတ်စလင်အများစုနေ ထိုင်ရာ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်သို့ ပြောင်းစေခဲ့။ ရွာတွင်ကျန်ခဲ့သော မွတ်စလင်ပိုင် ပစ္စည်းများကို အကြမ်းဖက် သမားများက စိတ်ကြိုက်လုယူဖျက်ဆီးခဲ့။
ညနေ ၄း၃၀။ ။ဈေးဟောင်းမော်လိတ်တွင် အကြမ်ဖက်ရခိုင်များ ၀င်ရောက်မီးရှို့ ဖျက်ဆီးကာ မွတ်စလင်များကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဓားဒဏ်ရာဖြင့်မွတ်စလင် ၂ ဦးသေ ဆုံးကာ ၁၅ ဦးပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိပြီး အခြေအနေ စိုးရိမ် ရကြောင်း။
ညနေ ၅ နာရီ။ ။စစ်တွေ စံပြရွာ(ဘာဆော်ရာရွာ) တွင် ဗလီနှင့် မွတ်စလင်အိမ်ခြေများကို အကြမ်းဖက်များက မီးရှို့ဖျက်ဆီးရာ ညနေ ၆ နာရီအထိ အိမ်ခြေ ၁၅၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့။ ယခုအခါ မွတ်စလင် အများစုနေထိုင်ရာ စစ်တွေရှိ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သို့ လုံခြုံရေးများလာပြီး ‘ ရခိုင်များလာရောက် မီးရှို့မည်။ ပြန်လည်ခုခံခြင်းမပြုပါနှင့် ‘ ဟု မွတ်စလင်အိမ်များကို လိုက်လံပြောဆိုနေကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက် သမားများကလည်း လူစုလူဝေးဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းဒေသခံများ ပြောကြားချက်အရ သိရပါသည်။
ညနေ ၆ နာရီ။ ။ ဘူမိရွာတွင်အကြမ်းဖက်သမားများသည် ရွာကိုမီးရှို့နေပါသည်။ လုံခြုံရေးရဲ များမှ မွတ်စလင်များဘက်ကို လက်နက်များဖြင့် ချိန်ရွယ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်သမားများမှ ဖျက်ဆီးနေခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ရွာရှိအိမ်ခြေ ၃၅၀ ကျော်အကုန် မီးလောင်ကျွမ်းနေ။ မွတ်စလင်များဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးနေကြ။ စားစရာ၊ ၀တ်စရာ မရှိပါ။ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးများအထူးလိုအပ်နေပါသည်။See More
မောင်းတောမြို့ က ရိုဟင်ဂျာများအားအစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုရဲ့  နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
Sunday, June 10, 2012 Rohingya Blogger No comments
မနေ့ ၀၈ ၊ ဇွန် ၊ ၂၀၁၂ နေ့ပိုင်းတွင် မောင်းတောမြို့ နေ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား ဒေါက်တာနောဂျူမော်ဒင် အသက် (၆၅ – ၇၀) လောက်ရှိသူသည် စစ်သွေးကြွ အကြမ်းသမားတို့၏ ရက်စက်စွာ ဓါးခုတ် သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ယနေ နံနက်ပိုင်းတွင် မောင်းတောမြို့ မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ တဖန် မနေ့က
နုရ်ရုရ်အာမီန် ဆိုသူကိုလည်း ၎င်း၏ ဆိုင်၌ပင် လည်ပင်ကို ဓါးဖြင့်လှီးဖြတ် သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ၎င်းကျေးရွာသား တစ်ဦးမှစုံစမ်းသိရှိရသည်။ ၀၉ ၊ဇွန် ၊၂၀၁၂ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ၈ နာရီလောက်တွင် မောင်းတောမြို့ တောင်ပိုင်း ၅ မိုင်အကွာအဝေးတွင်ရှိ ဒုရှီရာတောင် ကျေးရွာသား လူငယ်
၂ နှစ်ဦးကို စစ်တပ်မှ ကားမောင်းသွားစဉ် ပစ်သတ်သွားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ မနေ့ ည ၌ ဖြစ်ဖျက်ခဲ့သော အကြမ်းဖက် မီးရှို့  သတ်ဖြတ်မှုတွင် ၃ မိုင် ဒုလာဖါရာရွာတွင်
မောင်းတော မြို့ ပြင်က ၃မိုင် ၄မိုင် ကျေးရွာများရှိ ရိုဟင်ဂျာအိမ်ခြေများ နှင့် အမှတ် (၅ )ရပ်ကွက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ အိမ်ခြေများစုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်မီးရှို့ ခံခဲ့ရပြီး ရိုဟင်ဂျာ မူစလင် အယောက် (၂၀၀ ) လောက် သတ်ဖြတ်ခံရသည်ဟု ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာများကဆိုကြသည်။ ပြင်ပ မီဒီယာများတွင် သတင်းလွှင့်ရာတွင် ရိုဟင်ဂျာတွေကမီးရှို့ နေတယ်၊သတ်နေတယ်ဟူ၍ လုပ်ကြံသတင်းများကို ဖြန့်ဝေကာ ခားတဖက်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတော ဒေသနေ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို ညတွင်းချင်း အုပ်စုလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများကို ရက်ရက်စက်စက် ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ အရပ်သား ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးကို ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာပတ်ဝန်ကျင်၌ ရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် အစောင့် အကြပ်များဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားပြီး အိမ်တွင်းနေ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အိမ်များကို မီးရှို့ ၍ အိမ်ပြင်ထွက်လာသူများကို ရက်ရက်စက်စက် သားကောင်းများသဖွယ် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီးကားပေါ်တင် သယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း မနက်မိုးလင်းတော့ လမ်းပေါ်တွင် စွန်းထင်နေသော သွေးများကို မီးသတ်ကားများဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်သက်သေ တစ်ဦးဖြစ်သူ လက်ရှိ U.N အမူထမ်းတစ်ယောက်ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပြည်ပ သတင်းဌာနများနှင့် ပြည်တွင်းက သတင်များတွင် ဖေါ်ပြနေသကဲ့သို့ ရိုဟင်ဂျာတွေက သတ်နေတယ် ၊ဘင်္ဂလာက ဘင်္ဂါလီတွေဝင်ရောက်လာပြီး ရခိုင်ကို သတ်နေတယ်ဆိုတာ လုံးမဟုတ်ပါဘူး အခုကိစ္စကို ဘက်မလိုက်ဘဲ သတင်းအမှန်ကို ရယူ ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မီဒီယာများကို မောင်းတောမြို့ ခံ ရိုဟင်ဂျာများက တောင်းဆိုပါကြောင်း သတင်းဌာနများသို့ မောင်းတောလူထု ရိုဟင်ဂျာတို့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
hey kalar, I am reading each and every line of your comment and laughing by myself but in the meantime realizing how disgusting make up stories you kalars can write and remebering the camel story..
But, the truth will come out soon.
Posted by BRAT at 23:29
Terrorist Rohingya kalars can write as much as they like but the truth facts are now coming up in some of Outside medias are now showing the truth.
ွှအခုလတ်တလောဖြစ်ပွါးနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက် နှစ်ခုရှိပါတယ်။
၁။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနိူင်ရမှာကို မလိုလားတဲ့ စစ်တပ်နောက်ခံကြံ.ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်၊ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများပြုလုပ်စေပြီး စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးစားခြင်း
၂။ ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီး ရခိုင်နိူင်ငံ တည်ထောင်ရန်ကြိုးစားခြင်း
…..ရည်ရွယ်ချက် ကိုယ်စီ ရှိတဲ့အတွက်………
…..နောက်ပိုင်းကျရင် ရခိုင်တွေနဲ့ အစိုးရနဲ့ တိုက်မယ့် ပွဲ တစ်ပွဲ ကြည့်နိူင်မယ်……..
သွေးမျက်ရည်ရေ.. မတူတဲ့ အမြင်လေးပါနော့..
ကျနော်တော့ အဲ့နှစ်ခုလုံး မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ အဲ့လောက်ကြီး မရိုးရှင်း အစွန်း
နှစ် ၂၀ကျော်အုပ်ချုပ်လာတဲ့ စစ်တပ်က အကြီးအကဲတွေလည်း
အမေစုကိုတောင် လိုသလို ကွန်ထရိုးလုပ်နေတာကြည့်ပါလား။
ခုတခါတော့ သမတကြီးဘက်က ကျနော် ထောက်ခံတယ်ဗျာ…
This is reallyastupid/funny comment of you, karlar…. We know what you are up to, right now, not only Rakhine and Burma, even other races of Myanmar are in same tone which is Rohingya are terrorist and invaders from Bangla.
Muslims And Set Fire on Rohingyas’ Homes Within Curfew Period in Maung Daw
– 09. Jun, 2012 | Uncategorized –
0 Security Personnel and Rakine Buddhists Jointly Kill Roingya Muslims And Set on Fire Roingyas’ Homes in Cufew Period
Maung Daw, Arakan state : The authority imposed Curfew in Maung Daw from6:00 pm to6: 00 am. But the Security Personnel and Rakine Buddhists jointly killed Rohingya Muslims and Rohingyas’ homes were set on fire within the Curfew Period.
The Security forces without uniforms attacking Rohingya Muslims with Rakhine Buddhists so that Muslims can not recognize them, according toaRohingya Muslim from Maung Daw townsip in who denied to be named.
The Security forces parked their patrol truck in the center of the town and there they called Rakhine Buddhists youths and gave them some weapons to attack Muslims with them as well as petrol to set fire on Rohingya Muslims’ homes.
The Security Personnel guarded and accompanied the Rakhine people to the Monstries and kept them there so that Muslims can not attack them. After keeping Rakhines in the Monsteries safely, the Security Personnel and Rakine Youths jointly killed Muslims and they also set fire on the Muslims’ homes and if any Muslim comes out of their houses to protect their homes and properties from fire the Security Personnel killed them.
The Security Personnel and Rakine Buddhists killed more than 1oo Rohingya Muslims including Rohingya children and more than 30 villages of Roingya Muslims were set on fire within the Curfew Period according toaMuslim from Maung Daw who denied to be named here.
Blood Tears is Rohingya kalar..
Saturday, June 09, 2012 Rohingya Blogger2comments
.အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာရွာပေါင်း (၃၀)ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဦးရေး ခလေး လူကြီးနည်းဆုံး (၁၀၀)နီးပါး
မိုးဆယ်အုပ်စုက ရိုဟင်ဂျာရွာအားလုံး၊ ၃ မိုင် ၊ ၄မိုင် ရှိရိုဟင်ဂျာရွာများနှင့် မြို့ ဦး ဒူလာဖာရာရှိ ရိုဟင်ဂျာရွာ
အားလုံးရှိ… အိမ်းပေါင်း ထောင်ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး အိမ်တွင်းနေ အိမ်သားများ အိမ်ပြင်ထွက်လာပါက
အပိုင်း (၄) မောင်းတော့မြို့ အနှံ့ ရိုဟင်ဂျာရွာများကို ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့၍ လူကိုအစုလိုက် အပြုံလိုက် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုကြီးအကြီးအကျယ်လုပ်နေကြသည်
Blood Tears ဆိုတဲ့ မင်းကဘာကောင်လဲ မူစလင်လား၊ ဘာသတင်းတွေလာတင်နေတာလဲ မင်းကစောက်ရုးလား မင်းပထွေးရိုဟင်ဂျာတွေကလုပ်နေတာ ရခိုင်တွေကလုပ်နေတာမဟုတ်ဖူး
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ မြန်မာနိုင်ငံကထမင်းကိုစားပီးတော့ ခွေးကျင့်ခွေးကြံ ကြံနေတာလေ မင်းတို့ စောက်ကုလားတွေက ဘယ်နိုင်င့ကမှ လက်မခံလို့ သူများနိုင်ငံမှာ ကပ်မြောင်စားသောက်နေပီးတော့ ငါ့တို့ လူမျိုးတွေကိုစော်ကားတယ်၊ ခွေးတောင်မှ အစာကျွေးတဲ့ သခင်ကို သခင်မှန်းသိတယ် မင်းတို့ စောက်ကုလားတွေကသာ အစာကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်နေတာလေ စောက်ကုလားတွေ ခွေးလောက်တောင် အသိတရားမရှိတဲ့ကောင်တွေ၊ မင်းတို့ ကောင်တွေက ပါးစပ်နဲ့ပြောဖို့ မတန်တဲ့ကောင်တွေ၊
Blood Tears is definately Kalar… That dog is making up news and posting on MG. MG, please delete that kalar …..
If NLD did not involve in pleasing the muslims leader at Yangon Downtown Bangali Mosque, no body would be that asking NLD to say the truth of what’s actually happening inside Myanmar. I agree with you that Govt is responsible for this but do not forget that Daw Su is the icon of Myanmar too. 88 Students group is also an allied group of NLD. So, if you do not really understand the current situation, watch out what you want to say…
ပေါက်တောမြို့ နောက်ဆုံးရသတင်းများ (ဇွန် ၁၁)
ယင်းသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင်း ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ၁၀ ဦး(၁ ဦးစိုးရိမ်ရ၊ ၉ ဦး မစိုးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသား (၄)ဦး (မစိုးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ By : Hmuu zaw
ဒီတခါတော့.. စစ်တပ်ကို အုပ်ချုပ်ပါလို့.. ဆွဲသွင်းနေတာ.. မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်ပါပဲလို့.. သိသာနေပါ့ရောလား..
‘ခင်ဗျားတို့ဟာ (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)ကို(မ)လိုချင်ရင် (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)ကို(မ)ရနိုင်လောက်တဲ့ စည်းကမ်းကိုရှိကြပါ။ (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)ကို (မ)လိုချင်လို့ရှိရင် (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)ကို(မ)ရနိုင်တဲ့ ညီညွှတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းကြပါ။ (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)ကို(မ)လိုချင်ရင် (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)ကို(မ)ရနိုင်တဲ့ ထူထောင်မှုကိုလုပ်ကြပါ။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ရှေ့ကို (ဒီမိုကရေစီ)အရသာကို ခံစား၊ စံစားစေချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်ကြဖို့၊ စည်းကမ်းရှိကြဖို့၊ ယခုကတည်းက ခင်ဗျာတို့ကိုယ်ကို အကျင့်ဆိုးတွေ၊ အကျင့်ဟောင်းတွေ၊ စောက်ကျင့်တွေကို ပြင်ကြဖို့လိုပြီဆိုတာ ကျနော် ကနေ့ပြောခဲ့ချင်တယ်။”
( ၁၃ . ၇ . ၁၉၄၇ မြို့တော်ခန်းမ၊ ဗိုလ်ချုပ်နောက်ဆုံး ပြောကြားခဲ့သောမိန့်ခွန်း။)အား ကွင်းခတ်( ) စာသားများ ပြင်ဆင်ထားသည်။
ဖတ်ကြည့်ပါ သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူားအပေါင်းတို့………….
“သတိ…… မြန်မာပြည်သားများ အားနာလျှင် အားပါသွားလိမ့်မည်”
၆။ ရိုဟင်ဂျာ များ မြန်မာပြည်တွင်း ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်လာရာတွင် အဓိက အသုံးပြုသော အချက်များမှာ……………………….
အစိုးရပိုင်းမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ငွေမျက်နှာ ၁ခုပဲ မကြည့်ကြပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ အစိုးရပိုင်းမှ မကူညီပဲ ဘယ်လိုမှ အရာမရောက်နိုင်ပါ။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လှပါသည် ဆိုသော လက်ရှိအာဏာရ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီကြီးကရော ဘာတွေလုပ်နေကြပါသလဲ..? ကိုယ့်ဆွေးမျိုးလေးလောက်ပဲကွက်ပြီး ချစ်မနေကြပါနဲ့.. ပြည်သူ့ မျက်နှာလေးလဲကြည့်ကြပါအုံးဗျာ…. မြန်မာအမျိုးသမီးဟုခံယူထားသူ အမျိုးသမီးထုကြီးအားလည်း ငွေမျက်နှာ ၁ ခုတည်း မကြည့်ကြရန် နိုးဆော်အပ်ပါသည်။ အချင်းချင်း အသိပညာ ဗဟုသုတလက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ။
မှတ်ချက်။ ” မြေမျို၍ လူမျိုးမပြုတ်နိုင် လူလူချင်းမျို၍ ဖျက်ဆီးမှသာ လူမျိုးရော တိုင်းပြည်ပါ ပျောက်ကြရပါလိမ့်မည်။”
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) – Anti Terrorist at 11:09 AM 1 comments
koko baw says:
Aung Myae မင်းလိုမျိုးတော့ငါလည်းပြောတတ်မှာမဟုတ်ဖူး
ရိုဟင်ဂျာတွေလို့အမည်ကပ်တာလား . . .
နစခ နဲ့ လ၀က တွေကို စစ်
ဒါနဲ့စကားမစပ် ဗမာလူမျိုးစစ်စစ် သားစဉ်မြေးဆက် 7ဆက်လောက်ရှိသောသူကို
မျိုးမစစ်ဆိုတဲ့မူဆလင်တွေကဆွေစဉ်7ဆက်မျိုး7ဆက် မှုဆလင်တွေပါ